Kana usingakwanisi kuwana data inowanikwa muwebhu, Ndiwo dzimwe nzira dzingashandiswa nomunhu kuti awane nyaya dzinodiwa. Semuenzaniso, munhu anogona kuwana data kubva kune-web-based APIs, kubudisa data kubva pamapurisa akasiyana-siyana kana kunyange kubva pawindo rekutsvaga mawebsite. Kubvisa dhiyabhorosi kubva kuPPs ibasa rakaoma se PDF hazviwanzove rine mashoko chaiwo angadikanwa. Kune rumwe rutivi, panguva yekugadzirwa kwekona, zvinyorwa zvinobudiswa zvinogadziridzwa nekodhi kana kushandiswa kwekuchera. Kuwana doro data yebasa kunogona kuva basa rakaoma, asi kana munhu aine pfungwa yezvinodiwa kuti zviitwe, zvino zvinova nyore.
Chimwe chezvinangwa zvakakosha zvekutsvaga webhutori ndechokukwanisa kuwana ruzivo rwakagadzirwa nemichina - ridaex nuke series. Iyi dhesi inosimbiswa nekombiyuta yekugadzirisa, uye dzimwe mienzaniso yayo yemafaira inosanganisira XML, CSV, Excel mafaira, uye Json. Dhiyabhorosi-data inogona kuverengwa ndeimwe yenzira dzakasiyana-siyana idzo munhu angashandisa kuwana dhipe data yewebhu sezvo iri nyore nzira uye haifaniri hupamhi hwemaitiro kuitira kuti huitwe.